Ear infections နားပိုးဝင်ခြင်း – Mawlamyine Daily
Ear infections နားပိုးဝင်ခြင်း
Mawlamyine Daily	က်န္းမာေရး, ေဆာင္းပါး	 September 26, 2020 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၂၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၂၀
၁။ ဆရာရှင့် ကျမညီလေး အသက်၂၆ ပါနားထဲနာပေါက်နေလိုပါ ဆေးခန်းပြပြီးပါပြီ သက်သာလို့ လုပ်ပြန်ဆင်းတာ ညိုမိပြီးပြန်ဖြစ်ပါတယ် အလုပ်ကဝပ်ရှော့လုပ်ဆိုတော့မြဲညိုမိပါတယ်ရှင် အဲဒါဆေးစာလေးပေးပါဦးရှင် နာကကိုက်ပါတယ် အသံကြားရင်အူနေတယ်ပြောပါတယ်ရှင် ဖျားလည်းရှိပါတယ်ရှင် ဆရာကျမ္မာသက်ရှည်ပါစေ။ ဖြစ်တာ တပတ်လောက် ရှိပါပြီရှင် အမှားပါရင်ရိုသေစွာတောင်းပန်ပါတယ်ရှင့်
မဖြေခင် သတ်ပုံပြင်ရဦးမယ်။ နာပေါက်ကို အနာပေါက်လို့ရေးသင့်။ နာကကို အနာကလို့ရေးသင့်။ ညို မဟုတ်ပါ။ နှစ်ကြိမ်လုံးမှာ ညိုရေးတာမို့ မှားသိနေတာသေချာတယ်။ ညှော်လို့သာ ရေးရတယ်။ ညှော်က အနာအတွက် အရေးမကြီးပါ။
နားထဲအနာပေါက်တာကတမျိုး အလွန်နာတယ်။ နားအပြင်ပိုင်းမှာ ဖြစ်တယ်။ ပြည်ရှိတတ်တယ်။ ပြည်ထွက်အောင်လုပ်မှ ပျောက်တယ်။ ပိုးသေဆေး + အနာသက်သာဆေး ပေးရမယ်။ အလယ်နားပြည်တည်တာရှိတယ်။ နားစည်ပေါက်တာ ရှိတယ်။ နားအူတာကတမျိုး။ လင့်တွေပေးမယ်။ အရင်ကလည်း မေးကြတယ်။
၂။ ဆရာခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်သမီးလေးက အခုလေးလရှိပါပြီ။ သူ့ဘယ်ဘက်နားထဲမှာ ဝါကျင့်ကျင့်အရည်လိုလို အဖတ်လိုလိုလေးတွေ ထွက်ထွက်နေလို့ပါ။ နားဖာချေးမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ အနံ့တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ ဘာများ ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့ပါခင်ဗျ။
၃။ သမီး အသက်က ၂၇ ပါ။ အခုဖြစ်တာက နှာခေါင်းပိတ်ပါတယ်။ နှာလည်း အနည်းငယ် စေးပါတယ်။ အစားအသောက် စားရင် အနံ့အရသာ ဘာမှကို မသိတာပါ။ ဘာနံ့မှ မရပါဘူး ၁ဝ ရက်ခန့် ရှိနေပါပြီ ဆရာဝန်နဲ့လည်း ပြပါတယ်။ နှာခေါင်း အနံ့ မရတာက သက်သာ မလာပါဘူး။ တခါတရံ တဘက်ကပိတ်နေပါတယ်။ ချွဲလည်း တော်တော်ထွက်ပါတယ်။ ချွဲပျော်ဆေး SOLVIN လည်း ဆရာဝန်ပေးတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်။ မဖြစ်ခင်က ချောင်းတခါတလေဆိုးလို့ ဆရာဝန် ပြပါတယ်။ အခု ချောင်းဆိုး သက်သာသွားပြီး နှာစေးပါတယ်။ အရင်က CETIRINE တလုံးသောက်ရင် သိသာစွာ ပျောက်ပါတယ်။ အခုက ခဏခဏတော့ နှာမချေဘဲ နှာပိတ် နှာရည်ကျဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က မသက်သာလျှင် နား-နှာခေါင်း ဆရာဝန်ပြရန် ပြောပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ။ အနံ့အာရုံ အရသာမရှိ ဖြစ်နေတာကို စိတ်ညစ်လှပါတယ်။
နားအလယ်ပိုင်းကနေ Eustachian tube ပြွန်နဲ့ လည်ချောင်းနောက်မှာ ဆက်နေတယ်။ နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်း တနေရာမှာ တခုခုဖြစ်ရင် ဆက်ဖြစ်တတ်တယ်။ နှာစေးနဲ့ ချောင်းဆိုး ဆက်နေတယ်။ နှာစေးလို့ နားကို သက်ရောက်တယ်။ အနံ့ကိုပါ လာထိခိုက်တယ်။ ပြွန်ကဆို့နေလို့ နားရောင်တာ ဖြစ်တယ်။ ပြွန်ကို ရောင်စေ၊ ပိတ်စေတာဖြစ်လာရင် နားစည် နောက်မှာရှိတဲ့ နားအလည်ပိုင်းမှာ အရည်တွေ များလာတယ်။ အများဆုံးက အအေးမိတာကနေ ဆက်ဖြစ်တာတွေပါဘဲ။ အအေးမိတာက အနေရခက်တဲ့အထဲ ဆက်ဖြစ်တာတွေက မေးတဲ့သူမှာ ဖြစ်သလို ပိုဆိုးပါတယ်။ လေပြွန်ရောင်နဲ့ နားရောဂါရတာ ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ တချို့မှာ ပန်းနာ ဖြစ်လာတတ်တယ်။
ရက်တို လေပြွန်ရောင်တာလည်းပါတယ်။ ဗက်တီးရီးယား ကနေရော ဗိုင်းရပ်စ်ကနေပါ ဖြစ်စေတယ်။ ချောင်းဆိုးမယ်၊ ချွဲထွက်မယ်၊ ချွဲကလဲ ဖြူ-ဝါ-သွေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ အတော်များများက ဆေးမပါဘဲ သက်သာသွားတယ်။ တပါတ်နေလို့ မပျောက်ရင် ဆရာဝန်လိုလာပြီ။ လည်ချောင်းနာနဲ့ အာသီးရောင်တွေကလဲ အအေးမိတာနဲ့ တွဲ-ဆက်နေတတ်တယ်။ နှစ်မျိုးလုံးကို ဗိုင်းရပ်စ်ကနေရော ဗက်တီးရီးယားကနေပါ ဖြစ်စေတယ်။ Streptococcus bacteria ကနေဖြစ်တာကို Strep throat ခေါ်တယ်။ (အလာဂျီ)၊ ဆေးလိပ်နဲ့ တခြား အငွေ့အသက်တွေကြောင့်ပါ အဲလိုလာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Acute bronchitis ရက်တို လေပြွန်ရောင်တာလဲပါတယ်။ ဗက်တီးရီးယားကနေရော ဗိုင်းရပ်စ်ကနေပါ ဖြစ်စေတယ်။ Cough ချောင်းဆိုးမယ်၊ Mucus ချွဲထွက်မယ်၊ ချွဲကလဲ ဖြူ-ဝါ-သွေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ အတော်များများက ဆေးမပါဘဲ သက်သာသွားတယ်။ တပါတ်နေလို့ မပျောက်ရင် ဆရာဝန်လိုလာပြီ။
နားလမ်းပိုးဝင်တာ အလွန်အဖြစ်များတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေ နှာရည်ယိုရာကနေ သိပ်ဖြစ်တတ်တယ်။ ကလေး အအေးမိသူထဲက ၆၁% မှာ နားပါ ရောင်တယ်လို့ လေ့လာမှုတခုက ဆိုတယ်။ နားရောင်နေတာသေခြာအောင် နားကို ဆရာဝန်ကနေ Otoscope ကရိယာနဲ့ ကြည့်မယ်။
နားထဲမှာ နားပြွန်ရှိတယ်။ သူက နားအလည်ပိုင်းနဲ့ လည်ချောင်း (အာခေါင်) ကို ဆက်ပေးထားတယ်။ ပြွန်မှာ နှာခေါင်းထဲ၊ လည်ချောင်းထဲမှာလိုမျိုး အချွဲရှိတယ်။ ဒါရှိနေလို့ နားအလည်ပိုင်းကနေ အရည်ရှိရင် ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ နားထဲက ဖိအားကိုလည်း ထိန်းပေးတယ်။ နားစည် ကောင်းနေဘို့က အရေးကြီးတယ်။ ကြည့်လိုက်ရင် ကောင်းနေတဲ့ နားစည်က ကြည်လင်နေရတယ်။ ပန်းရောင်နဲ့ မီးခိုးရောင် ရောနေသလို ရှိရတယ်။ ပိုးဝင်ထားတာဆိုရင် နီပြီး ရောင်နေမယ်။ အအေးမိတာ၊ တုပ်ကွေးမိတာနဲ့ (အလာဂျီ) ရတာတွေကနေ နားပြွန်ကို ထိခိုက်စေပြီး ရောင်လာစေတယ်။
နားကိုပိုးဝင်တာက ၈ဝ% ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကနေဖြစ်တယ်။ ဒါဆိုရင် ပိုးသေဆေး မလိုဘူး၊ မရဘူး။ Streptococcus ဗက်တီးရီးယားကနေ ဖြစ်တာလဲ မနည်းဘူး။ နား နာမယ်၊ အဝါရည်၊ အရည်ကြည်၊ အချွဲရည် ထွက်မယ်။ ကိုယ်နဲနဲ ပူမယ်။ ပဋိဇီဝဆေးတွေလိုတယ်။
ဗက်တီးရီးယားကနေဖြစ်တဲ့ နာရောင်တာအတွက် ပဋိဇီဝဆေးတွေကတော့ -• Penicillin Antibiotics ထဲမှာ Amoxicillin နဲ့ Augmentin တွေပါတယ်။• Sulfonamide Antibiotics တွေထဲမှာ Bactrim, Septra နဲ့ Gantrisin တွေပါတယ်။• Cephalosporin Antibiotics တွေထဲမှာ Ceclor, Ceftin, Cefzil, Vantin, Suprax နဲ့ Lorabid တွေပါတယ်။• Combination Antibiotics ဆေးတွဲပေးတာတွေလဲ ရှိတယ်။ ဥပမာ Pediazole = Erythromycin + Sulfisoxazole• Amoxicillin 500mg တခါသောက် ၁ တောင့်၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ အနည်းဆုံး ၅ ရက်သောက်ပါ။ Augmentin လည်း ပေးတယ်။• Bactrim, Septra နဲ့ Gantrisin တွေပါတယ်။• Ceclor, Ceftin, Cefzil, Vantin, Suprax နဲ့ Lorabid တွေပါတယ်။• ဆေးတွဲပေးတာတွေလဲရှိတယ်။ ဥပမာ Pediazole = Erythromycin + Sulfisoxazole
အသုံးများတဲ့ နားထည့်ဆေးတွေကတော့ -1. Betamethasone Eye/Ear Drops 0.1% w/v + 0.002%2. Carboxy Methyl cellulose sodium -Eye 0.5%3. Chloramphenicol Eye/Ear drop 5ml & 10 ml4. Ciprofloxacin Eye Drops 5ml & 10ml5. Gentamicin Eye/Ear drop 5ml & 10 ml6. Neomycin Sulphate Eye/Ear drop 5ml & 10 ml7. Ofloxacin Eye Drops8. Prednisolone Acetate Eye/Ear drop 5ml & 10 ml9. Prednisolone Chloramphenicol Eye Drop 10ml10. Soframycin Eye/Ear Drop 8ML